Burmese taste - Iora: Santa Cruz Visit - ကြွေပန်းပွဲတော် နဲ့ Mystery Spot
Posted by Iora at 4:16 AM
jasmine(တောင်ကြီး) December 23, 2011 at 6:52 AM
စိတ်ဝင်စာဖွယ်ကောင်းလှတဲ့ ခရီးသွား ဗဟုသုတလေးအတွက်
Merry Christmas & Happy New Year ပါ
san htun December 23, 2011 at 11:24 AM
Nyi Linn Thit December 23, 2011 at 1:33 PM
ပုံတွေ၊ ရှင်းလင်းစာတွေနဲ့ တဝကြီးကို လည်လိုက်ရတယ်၊ ပန်းပွဲတော်က အတော်လေး လှတာပဲ၊ ပြင်ဆင်နေကြတာလည်း ပျော်စရာကြီး..၊
အရေးထဲ ဒီမိုဘိုင်းဟုမ်း ဆိုတဲ့ စာသားကို ဖတ်ပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ် ခေါင်းထဲမှာ Demo buy home လို့ ရွတ်မိသွားတယ်၊ ဘာများပါလိမ့်ပေါ့၊ ဒီမိုကရက်တွေ အိမ်ဝယ်ကြတဲ့ ပရိုဂရမ် များလားလို့ လျှောက်တွေးရင်း စာကြောင်းတွေ ဆုံးတော့မှ သြော်..ငါ့နှယ်နော် ဆိုပြီး ထိုင်ရယ်နေရ သေးတယ်၊းD ရွှေသမင် ထက်တော့ ဆိုးတော့မယ် ထင်တယ်၊းP
Mystery spot ကို လိုက်လည်ဖို့ အသင့်ပြင်ပြီး စောင့်နေပြီနော်...။း)
rose December 23, 2011 at 4:55 PM
Thanks to your post, I visit to Santa Cruz :D. I get to know that you travelalot when you describe your journery to the mountain in Kachin state... wow :O. All photo are so beautiful. I'm very eager to know what is "mystery spot."
Iora December 23, 2011 at 6:45 PM
ကုိုယ့်ပုို့ စ်လေးကြောင့် ကြည်နူးရတယ်ဆုိုတော့ကိုယ်လည်း ကြည်နူးရပါတယ်။ မြန်မာပြည်တုန်းကခရီးသွားဓါတ်ပုံတွေ ကုိုယ်နဲ့ မသယ်နုိုင်ခဲ့တာ အမြဲသတိရ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။
ကို်ယ်က ဓါတ်ပုံတွေမကောင်းလုို့ တင်ရတာ အားနာနေတာ။ တော်သေးတာပေါ့ စန်းထွန်း ကကောင်းတယ်ထင်တော့။
မန့် ထားတာဖတ်ပြီး ကျမတကယ်ကိုရယ်မိတယ်။ စာရေးဘယ်လောက်ချာလည်းဆုိုတာ အဲဒါသာကြည့်တော့။ အဆင်သင့်ရင်တော့ ပြင်လုိုက်ပါအုန်းမယ်။ ရွှေသမင် နဲ့ နင်လားငါလားလာမပြိုင်နဲ့ နော်။ ရွှေသမင်က ပုိုကြောင်တယ်။ နုိုး တူး။
ဒီလိုစောင့်နေလို့ ကတော့ ခေါ်ပြီးသားဘဲ။
Yah..I travelalot but it is too bad I did not bring my travel notes and diaries with me. Otherwise I would have tortured to you guys already. :)
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) December 24, 2011 at 5:33 AM
Begonia ပုံ အနီးကပ်လည်းမပါဘူး
ဒါနဲ့ ကြွေပန်းဘယ်လိုဟာလဲလို့ google မှာ လိုက်ရှာတာ တွေ့တော့တွေ့တယ် အဲဒီနုာမည်နဲ့က ၃ ၄မျိုးပေါ်လာတော့ ဘယ်ဟာမှန်းမသိဘူး ဖြစ်နေတာ။
စိတ်ဝင်စားတယ်.. ကြွေပန်းဘယ်လိုဟာလဲသိချင်သေးတယ်.။ နောက်ပိုစ့်ကျ အနီးကပ်တစ်ပုံလောက် တင်ပေးပါနော်။ ခုဟာတွေက သိပ်မထင်ရှားဘူး.
ခရီးသွားရတာ ပျော်စရာကြီး။ ပိုစ့်လေးဖတ်ရတာလည်း ပျော်စရာ
Merry Christmas ပါနော်..။
Iora December 24, 2011 at 12:00 PM
ပွဲတော်က ဘီဂုိုးနီးယားပုံမျိုး တင်ပေးလိုက်ပြီနော်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်က ကြွေပန်းတို့ မင်းသားကြီးခေါင်းပေါင်းတို့ ကအပွင့်နဲ့ ကွာပါတယ်။ ကြွေပန်းက သေးသေးလေးတွေ အဆုပ်လိုက်ပွင့်တယ်။ များသောအားဖြင့် ပန်းရောင်၊ အနီရောင် နဲ့ အဖြူရောင် ပွင့်လေးတွေ။ မင်းသားကြီးခေါင်းပေါင်းက အရွက်တွေရဲ့ အလှကို ဦးစားပေးတဲ့ပုံစံပါ။ နီးစပ်တဲ့ပုံလေးတွေ ရှာပြီးတင်ပေးလုိုက်မယ်နော်။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) December 24, 2011 at 7:16 PM
အပွင့်ပုံစံက ရုတ်တရက်ကြည့်ရင် ကာနေးရှင်းနဲ့တူတယ်နော်..
သူ့အရွက်က ဆတ်တောက်တောက်နဲ့ ချိုးလို့ကောင်းတဲ့ ပုံစံမျိုးထင်တယ်.
mstint December 25, 2011 at 8:02 AM
ရှုခင်းတွေလည်းလှတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေ ကြည့်ရင်းကြည်နူးတယ်။
Iora December 26, 2011 at 10:35 AM
ဒီအပွင့်ကပွဲတော်ကပန်းမျိုးပါ။ ဘီဂုိုးနီးယားဆိုတော့ ကြွေပန်းမျိုးလို့ ဆုိုရမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီပုံကကာနေရှင်း နဲ့ အရောင်စပ်ပုံဆင်ပါတယ်။ အပင်ပုံကတော့ ချောပြောသလို ကျွတ်ဆတ်ပြီး နုပါတယ်။ ကိုယ်တို့ ရဲ့ ကြွေပန်း နဲ့ မင်းသားကြီးခေါင်းပေါင်းက ဒီအပွင့်လိုမကြီးပါဘူး။
ဟုတ်တယ်နော် ပြင်ဦးလွင်ကပန်းခင်းတွေလည်းသိပ်လှတာဘဲ။
အိုင်အိုရာလည်း တီတင့်တုို့ ဆရာကန်တော့ပွဲက ပုံတွေကြည့်ရတော့သိပ်ကြည်နူးမိတာဘဲ။
မဒမ်ကိုး December 26, 2011 at 11:40 PM
Iora December 27, 2011 at 6:12 PM